SomaliTalk.com » 2010 » October » 26
Home » Archive Maalinta October 26th, 2010
5 Jaamacado Soomaaliyeed oo ka mid noqday 12kun ee ugu sareeya Jaamacadaha Adduunka
Prof. Cabdirizaaq Maxamed Aaden (Lafoole) oo habeenimadii Sabtida ee Axaddu soo geleysey (Oct 24, 2010) Soomaalida deggan Minneapolis uga warbixiyey waxbarashada heerka jaamacadeed ee dalka Soomaaliya, ayaa rajo weyn iyo yididiilo ka muujiyo. Lafoole waxa uu dadkii kulanka ka soo qayb galay dhex dhigay su’aal ahayd “immisa jaamacadood ayaa Soomaaliya lahayn ka hor Axad 30-kii December...
MURUGO ( Gabay) | Waxa tiriyay : Aadan Maxamed Cabdi
naaleeye2008@hotmail.com Assalaamu Caleykum Waraxmatullaah, Walaalayaal, salaan ka dib, Waxaynu wada ognahay dhibaatada muddada dheer haysata dadka soomaaliyeed iyo dagaalada aan dhamaadka lahayn. Maalin walba waxaynu TV-yada ka daawannaa dhaawaca iyo dhimashada aan la koobi karin oo qofkasta oo damiir leh ama islaamnimo ku jirto uu ka danqanayo. Gabaygan danqashada ah oo aan u bixiyay Murugo waxaan...
Markii ay meesha ka baxday Dowladdii Malatariga ahayd ee Max’ed Siyaad Barre waxaa la soo maray khilaafyo fara badan oo sababay khasaarooyin isugu jira naf iyo maalba leh. Waxaa is qoomay markiiba Gen. Max’ed Faarax Caydiid iyo Cali Mahdi Maxamed, haddii uu dulqaad jiri lahaa xiligaa ama tanaasul isla markaana Cali Mahdi loo deyn lahaa labadii sano ee loo doortay madaxtinimada dalka sidan arrintu...
Halkudheg: Amiin, Farmajo